ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၄)
ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၄)
အရှင်ဉာဏဒီပ ( ဓမ္မရတနာ) ( http://www.ashinnyanadipa.com ) ၏ ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု
“ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား?” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘုန်းဘုန်းက ဒကာတော်လေးနဲ့ ဘုန်းဘုန်း နှစ်ဦးတည်းပဲ ဆွေးနွေးချင်တာလေ။
ဘုန်းဘုန်းကတော့ ရဟန်းတွေဘက်ကနေ မဆွေးနွေးဘဲ သာသနာတော်ဘက်ကနေ ဆွေးနွေးပေးချင်တယ်။
ရဟန်းတွေဘက်ကနေ ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတာက ရဟန်းတွေရဲ့ အလို။
သာသနာတော်ဘက်ကနေ ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတာက သာသနာတော်ရဲ့ အလိုပေါ့။
ဒကာတော်လေးတို့လို နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ သာသနာပြုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သာသနာဘက်က အလိုကိုလည်း သိထားသင့်တယ်လေ။
ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဆွေးနွေးချက်လေးကို သိရရင် ဒကာတော်လေးအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကျိုး တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ထွန်းလိမ့်မယ်လို့ ဘုန်းဘုန်း ထင်မိပါတယ်။
ဒကာတော် ကိုဝိမုတ္တိ ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ့ သာသနာ ပြုနိုင်ပါစေကွဲ့.....
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:05 AM